Haweeneyda Xiomara Castro oo loo Dhaariyay in ay noqoto Madaxweynaha Dalka Honduras | Allbalcad Online
Home WARARKA Haweeneyda Xiomara Castro oo loo Dhaariyay in ay noqoto Madaxweynaha Dalka...
Haweeneyda Xiomara Castro ayaa loo dhaariyay in ay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee ka noqota Dalka Honduras, iyadoo ay jirto Khalalaase siyaasadeed oo halis gelinaya qorshaheeda ku aadan Dalka Hundurus oo ah Dalka saboolka ah.
Iyadoo ka hadlaysay xaflada lagu dhaarinayey, Hogaamiyaha Garabka Bidix ayaa sheegtay inay hogaanka u qabanayso wadan “jaray” laakiin waxay wacad ku martay inay raadin doonto cadaalad bulsho iyo hufnaan.
Ms Castro, oo 62 Sanno jir ah, ayaa ballan qaaday in ay wax ka qaban doonto kooxaha awoodda leh ee ka ganacsada daroogada, ayna xorayn doonto sharciyada adag ee ilmo iska soo rididda. Laakin ajandeheeda waxa wiiqay khilaaf ka dhex aloosmay xisbigeeda Libre (Free)
Ms Castro ninkeeda, Manuel Zelaya, ayaa dalkaasi xukumayay inta u dhaxaysay Sanadihii 2006 ilaa 2009, markaasoo afgambi xukunka looga tuuray. Laba jeer ayay u tartamaysay xilka sannadihii ka dib markii xilka laga qaaday, ka hor intii aanay ku guulaysan doorashadii November ee la soo dhaafay.
Wixii markaas ka dambeeyay, Ms Castro waxa ay ku raaxaysanaysay mowjad wanaagsan oo ka dhex jirta dadweynaha. Imaatinkeedu waxa uu soo afjarayaa 12-kii sano ee uu xisbiga midigta ka talinayay xisbiga waddani, kaas oo ay hareeyeen fadeexado iyo eedaymo musuqmaasuq. Kumanaan kun oo qof ayaa ku soo biiray xaflada furitaanka garoonka qaranka ee caasimadda Tegucigalpa.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ka mid ahaa mas’uuliyiintii ajnabiga ahaa ee ka soo qeyb galay caleema saarka – isagoo sacab aad u weyn ka helay dadkii isugu soo baxay.
Previous articleDowladda Maraykanka oo Ku hanjabtay in ay Joojin doonto Dhuumaha Gaaska ee Nrd Stream 2
Next articleHogaamiyaha cusub oo jeediyay khudbadii ugu horeysay tan iyo markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore